Ukuthuthukiswa kwemigwaqo ye-AI ne-AIFPv3: Izindiza ze-AI azibonisi ... Kungani
Umbuzo Ukuthuthukiswa kwemigwaqo ye-AI ne-AIFPv3: Izindiza ze-AI azibonisi ... Kungani
unyaka 1 5 edlule #801 by laurentCazorla
Ngidala izimoto zami ze-Cevenn'air izimoto ne-FSX eziyisisekelo B738 no-CRJ700 ngangizidwebe futhi mina ngiyahamba nge-fly. Kodwa ngifuna ukudala i-AI traffic yami nge-AIFPv3 ... Konke kulungile ukusetha izindiza ze-AI bese ubutha, Uma ngiqala uFSX Steam kuyilanda njengendawo entsha kodwa uma ngiya esikhungweni sezindiza lapho amaplanethi ami kufanele ukukhombisa ku-Airport, ngesikhathi ngilungiselelwe i-AIFP, noma ubani wabo ubonisa ... Ngiyacela ukuthi kungenxa ye-FSX Steam. Empeleni uma ngifuna ukusetha i-AIFP nge-Steam (SE) Angikwazi ukuqhubeka. Ngimelwe ukusetha njenge-FSX. Ngivele ngineTransfisi ye-World ye-AI futhi sengivele ngizame ukumisa i-KLM WoAI B738 endizeni ye-EHAM / LFMT, ngihlangabezana nenkinga efanayo ...
Ngingathanda ukwazi uma kukhona enye indlela yokusetha i-trafiki yama-AI ngaphandle kokudlula i-AIFP ... Ngizizwa nginjengokukhathazeka